အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - ဘုရားသခင့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်
သူကအမှန်ပင်တစ်ခု Awesome ကိုဘုရားသခင်ဖြစ်ဘို့ငါတို့သခင်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ သူကကျွန်တော်မြင်ဖြစ်သိသောသူအပေါင်းတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်ကောင်းကင်နှင့်ကမ္ဘာမြေကိုယ်တော်ကိုမဆံ့နိုငျပါဘူး။ သူ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဘုန်းကြီးသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏အာဏာကိုအတိုင်းအရှည်မရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ခမည်းတော်သည်သန့်ရှင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သူ၏မေတ္တာတော်ကိုနိစ္စထာဝရဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ပညာစကားအားလုံးလူ့နားလည်နိုင်စွမ်းထက်မလွန်။ သူထိုက်တန်သည်ကောင်းကင်နှင့်ကမ္ဘာမြေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သူ့ကိုထောမနာသီချင်းဆို။
သူကအမှန်ပင်မင်းရှင်ဘုရင်ဘုရင်နှင့်သခင်သည်ထာဝရဘုရား၏တူသောအခြားသူတယောက်မျှမရှိ။ အမျိုးသားများအတွက်မငြိမ်မသက်နေတဲ့အချိန်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးမင်းသားရှာလျှင်သူတို့သာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးသာငါတို့သခင်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ငြိမ်းချမ်းရေးအားလုံးနားလည်မှုထက်မလွန်ကနေလာပါတယ်။ သင်၏နှလုံးအားလုံးနှင့်တကွသခင်ဘုရားကိုရှာကြလော့နှင့်သူသည်သင်၏လက်လှမ်းမမီအတွင်းကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဘုရားသခငျသညျသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏နှင့်သင်စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဆငျးရဲဒုက်ခမှတဆင့်ခံစားကြသောအခါသူကပင်သင့်ကိုမစွန့်မည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်သခင်ဘုရားအဘို့အကွောကျရှံ့ခွငျးသငျနှငျ့အတူဖြစ်ပြီးသူသည်သင်၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏။
ဘုရားသခငျသညျယရှေုအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့ကိုတဦးဖြစ်လာပြီးသူကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များပျောက်ဆေးကြောထားပြီးသူ့အသွေးအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ထိုက်တန်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ခမည်းတော်သိုးသငယ်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သခင်ယေရှု၏နာမ၌နှင့်ငါတို့သခင်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်အပြစ်လွတ်ကြပြီ။ ယရှေုခရအကြီးအုတ်မြစ်အဘက်ဘက်မှသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဘုရားသခငျ၏နေရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အံ့သြစရာများနှင့်သန့်ရှင်းသောဗိမာန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီနေရာချထားပါတယ်ခံရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းသောဘုရားခမည်းတော်သည်ထာဝရဘုရား၏စပျစ်ဥယျာဉ်၌ကိုယ်တော်၏အချိန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုခံထိုက်ပေ၏။
သင်၏နှလုံးအားလုံးနှင့်သူပြုမူမည်ဟုငါသိ၏နှင့်အတူသခင်ဘုရား၌ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ သင့်ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကိုပိုင်ရကြမည်သောသူတို့အားသခင်ဘုရား၏န်ကြီးများ၏ကောင်းကင်တမန်များအတွက်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ထာဝရဘုရားသညျသငျသညျကိုခစျြသူသငျနှငျ့အတူဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားတဘက်၌ရပ်နိုင်သနည်း မည်သူမျှအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်လိမ့်မည်နိုင်ဘူး။ မဟာငါ Am သင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ရပ်တည်သောသူသည်ကြောင်းကို သိ. အတွက်နှလုံးယူပါ။ သူထိုက်တန်သည်ငါတို့သခင်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းကြလော့။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသခင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းငှါကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အစေခံရန်နှင့်သခင်နှင့်သင်၏လမ်းလျှောက်၌သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာခရစ်တော်၏ဘုရားကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။